Battery Battery Lifepo4, Battery Lithium, Battery Solar - Lithtech
Shenzhen Lithtech Energy Co., Ltd. dia orinasa manana teknolojia avo lenta, manam-pahaizana manokana amin'ny R&D, famokarana sy marketing amin'ny vokatra bateria Lithium azo havaozina. Izay mirotsaka tanteraka amin'ny fikarohana & fampandrosoana, famokarana ary varotra amin'ny bateria lithium avo lenta.
Shenzhen Lithtech Energy Co., Ltd.dia orinasam-teknolojia avo lenta, manam-pahaizana manokana momba ny R&D, famokarana sy marketing amin'ny vokatra bateria Lithium azo havaozina.
Izay mirotsaka tanteraka amin'ny fikarohana & fampandrosoana, famokarana ary varotra amin'ny bateria lithium avo lenta.
Lithtech TE24100 2kw Lithium bateria miakatra Lithiu ...
Fampiharana: Fampiharana amin'ny bisikileta avo: fiara 4 × 4 Recr ...
Ny faritra Lithtech Lithium 24V dia natao manokana hanoloana ny halehibe Lea ...
Lithtech TE12200 Cycle lalina Lithium Ion 12V 200 ...
Misy laharana tady 12.8V naoty nomena 200Ah trano fonenana IP56 ABS tranga ...
100ah 48v 5KWH <5000 Life cycle amin'ny 80% DoD (halalin'ny famoahana) eo amin'ny efijery ...
Ireo dia mety amin'ny RV, camper van, motera trolling sambo na koa angovo azo avy amin'ny masoandro ...
Lithtech TE12300 12.8V 300Ah RV Battery Pack ...
Electrica Characteristics Tôtônaly Nominal 12,8V Fahaizana nominal 300AH Ener ...
Lithtech TE2000 48V 50Ah Lithium bateria 6000 T ...
Endri-javatra: ny fampidirana indostrialy mitsangana dia manome antoka tsingerina mihoatra ny 6000 amin'ny 80% DoD Sle ...
Lithtech TE4000 dia bateria lithium cycle 48V 100Ah lalina .Ny safidinao tsara indrindra hanoloana ny ...
Anaran'ny vokatra Deep cycle 12v 100ah lifepo4 lithium ion bateria Nominal Volta ...
Ny Lithtech dia manampy anao hilalao lava kokoa miaraka amina indroa ny fotoana mihazakazaka ho an'ny sarety golf na fiara elektrisinao.Safer ary tsy mipoaka, maivana (& kely kokoa) izay manampy amin'ny kilometatra maro kokoa amin'ny andiana tokana, matanjaka kokoa ...
Ny bateria Lithtech dia baterin'ny tsingerina lalina izay loharanon'ny angovo tsara indrindra ankehitriny. Izy io no azo antoka indrindra amin'ny lithium, loharanon'ny angovo bebe kokoa.
Ny Lithtech dia manohana ny bateria lithium OEM .Lithtech dia loharanom-pahefana mahery vaika. fiainana maharitra sy rafitra fitantanana bateria manan-tsaina.
Manana ekipa teknika tena tsara izahay, izay azo noforonina arakaraka ny takian'ny mpanjifa.
Shenzhen Lithtech Energy Co., Ltd. dia orinasam-teknolojia avo lenta, manam-pahaizana manokana amin'ny R&D, famokarana sy marketing amin'ny vokatra azo avy amin'ny bateria lithium azo ovaina.
Ahoana ny fomba hahatonga ny toerana misy angovo angovo ho azo antoka sy azo itokisana?
01-Fa maninona no mitera-doza ny fitahirizana angovo afovoany? Azontsika atao ny manazava azy amin'ny fomba fijery ny refin'ny angovo herinaratra. Ny herinaratra sy ny ankehitriny dia refy iray, reflexe tsotra, raha tsy misy izao dia tsy misy atahorana, toa ny 10KV, 220KV tsipika misy herinaratra avo lenta, mampiasa insulator izahay h ...
Inona no maha samy hafa ny sela solar sy ny bateria lithium-ion fitehirizana angovo
Ny bateria Solar dia karazana fitaovana famokarana herinaratra, izay tsy afaka mitahiry mivantana ny angovo herinaratra, raha ny bateria lithium ion kosa dia karazana bateria fitehirizana ary afaka mitahiry herinaratra tsy tapaka hampiasain'ny mpampiasa. Raha ampitahaina amin'ny bateria lithium-ion fitehirizana angovo, iray amin'ireo lesoka amin'ny sol ...
2021 / Jun / talata
Fomba fanatsarana sy fivoahana amin'ny bateria Lithium
1. Fitsapana fampiroboroboana ny bateria lithium Voalohany, avelao hidina any amin'ny 3.3V ny bateria lithium amin'ny alàlan'ny puce step-down, ary avy eo manome herinaratra ho an'ny microcontroller sy ny modely Bluetooth, ary mikasa ny hampiakatra azy io ho 7V hitondra entana. Vokany: tsy mandeha ny modely Bluetooth ary tsy afaka tadiavina. Esory t ...
Fahalalana momba ny agents conductive ho an'ny bateria ion lithium
Amin'ny maha-ampahany manan-danja ny bateria lithium ion, ny conductive agents, na dia kely aza ny habetsaky ny bateria dia misy fiatraikany lehibe amin'ny fahombiazan'ny bateria lithium ion, ary misy fiatraikany amin'ny fanatsarana ny tsingerin'ny bateria, ny fivoaran'ny fahaiza-manao, ny fahombiazan'ny tahan'ny , sns ... Tena imp ...